Ukuba ngumzali oqinisekileyo wokuLungisa ukungaziphathi kakuhle kubantwana abancinci | Oomama Namhlanje
Ukuba ngumzali oqinisekileyo ukulungisa ukungaziphathi kakuhle kubantwana abancinci
UMaria Jose Roldan | | Iingcebiso, Intsapho
Uqeqesho oluchanekileyo lujolise ngokukodwa ekubandakanyeni abantwana ngendlela enembeko kwaye lukhuthaza abazali ukuba bakhumbule ukuba abantwana banako ukuphucula nangona bengaziphathi kakuhle. Abantwana abancinci bahlala benomdla kwaye banomdla wokutyhala imida.
Ukunxibelelana nomntwana wakho ngaphambi kokwenza naziphi na izilungiso yindlela eqinisekileyo yokuphucula isimilo. Asinakho ukubaphembelela abantwana ngendlela elungileyo de senze unxibelelwano nabo.
Ngalo lonke ixesha umntwana wakho egqitha umda, wophula umthetho okanye ibhotile ye-shampoo, ngaphambi kokulungisa indlela yokuziphatha, qala uzame ukuthoba isantya. Yenza umzuzu ngabom wonxibelelwano. Ixesha apho ngokuzithemba unokuzisa ukhuseleko kunye nokuqonda emntwaneni wakho.
Ngena kwilizwe lomntwana wakho. Jonga ngaphaya kokunganyaniseki kwaye ubukele ukufunda kunye nokufumanisa okwenzekayo. Mkhumbuze ukuba ulidlelane lakhe, ukuba ungakwicala labo. Naxa usithi hayi okanye ukhalaze malunga nokuziphatha kwabo.
Ewe kunjalo, akusoloko kulula ukuhlala uzolile kwaye wenze ngathi konke ukutya okuchithekelwe phantsi akunamsebenzi. Ingongoma yile, umntwana wakho uyalufuna ukhokelo lwakho olukhuselekileyo noluzolileyo xa esenza iimpazamo. Ukuba nolindelo olusengqiqweni malunga nokuziphatha komntwana kunokukunceda wenze izigqibo ezizizo nezinxulumene noqeqesho.
Oku kunxibelelana kwangoko kubalulekile kuba indlela okhetha ukuqeqesha ngayo umntwana wakho. Amaxesha apho uqeqesho luyafuneka eneneni lelinye lawona maxesha abalulekileyo ekukhuliseni umntwana. amaxesha apho sinethuba lokuxonxa abantwana bethu ngokuqatha.
Ukuya kwi-Intanethi ngaphambi kokwenza izilungiso kunceda abantwana bakuthembe. Kuyanceda ukuba umbone ngokwenene umntwana wakho. Umbone ngokwenene umntwana wakho, ngalo mzuzu kunye nento ayifunayo. Ukuqhagamshela kukuvumela ukuba wenze umzuzu onentsingiselo wokumamela, wokuqinisekisa kunye nokwamkela umntwana wakho. Landela ezi ngcebiso ukuze ufumane:
Hlisa ulindelo lwakho okanye uloyiko (khumbula ukuba umntwana wakho akafezekanga njengawe)
Jonga izinto ngokwembono yomntwana wakho
Mamela into ayithethayo kuwe
Gxila kwizisombululo kunye nezinto ezinokwenzeka
Sebenzisa umnwe omnene ukuze unxibelelane
Thetha ngobubele nangokucacileyo
Gcina ujongano lwamehlo uze wehle kwinqanaba lomntwana wakho
Soloko unika izilungiso ngentlonipho
Ingqeqesho evela kwindawo yothando nenkathalo iyafundisa. Xa uqala ukudibanisa, uthetha nentliziyo nengqondo yomntwana wakho ngaxeshanye. Oku kunamandla. Luqeqesho ke olo. Leyo yindlela eqinisekileyo yokuziphatha okungcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Ukuba ngumzali oqinisekileyo ukulungisa ukungaziphathi kakuhle kubantwana abancinci
Ezona Webhusayithi ziBalaseleyo kuLwandle lokuBukela uSapho
Usuku lweLwandle lweHlabathi: imisebenzi yabantwana